Xog cusub: Yaa ugu cad cad qabashada guddoomiyaha baarlamanka HirShabeelle? - Caasimada Online
Home Warar Xog cusub: Yaa ugu cad cad qabashada guddoomiyaha baarlamanka HirShabeelle?
Xog cusub: Yaa ugu cad cad qabashada guddoomiyaha baarlamanka HirShabeelle?
Jowhar (Caasimada Online) – Sheekh Abukar Maqaneey, wasiirkii hore ee arrimaha Diinta iyo Owqaafta ee maamulka HirShabeelle iyo Cabdixakiin Luqmaan, oo ka tirsana safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa ah labada xubnood ee ugu cad cad doorashada guddoonka baarlamanka HirShabeelle, sida ay noo xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan baarlamanka.
“Cabdixakiin Luqmaan iyo Sheekh Abuukar Maqaneey ayuu dhaxmari doonaa tartanka ugu adag laakiin Cabdixakiin waxa uu heestaa lacag waayo waxaa taageerysa madaxtooyada oo meesha keensatay rajada ugu badanna waa isag,a” ayuu yiri mid ka mid ah baarlamaanka HirShabeelle oo la hadlay Caasimada Online.